भयवाद चिन्तन र विमर्श – मझेरी डट कम
त्यही कार्यक्रमको प्रतिवेदन उप-प्राध्यापक दीपक न्यौपाने र गोपीकृष्ण खतिवडाले तयार पारेको साहित्यिक प्रतिवेदन पनि समावेश छ । त्यसबेला लेखक, समालोचक, शिक्षक, पत्रकार, पाठकहरू डा. बद्रीविशाल पोखरेल, दधिराज सुवेदी, डा. केदार पौडेल, प्रकाश आङ्देम्बे, रमेश लिम्बू, कविराज न्यौपाने, डा. भोला रिजाल, सुरेश घिमिरे, गोपिकृष्ण खतिवडा, कृष्ण अधिकारीले लिखित रूपमा व्यक्त गरेका जिज्ञासा पनि समावेश छन् ।
यस बाहेक डा. गोविन्दराज भट्टराई, डा. सञ्जीव उप्रेती, कवि टङ्क वनेम, अशोक राई, बाल रोग विशेषज्ञ डा. हरि शर्मा, चेवन राई, राजकुमार दिक्पाल, प्रदिप मेन्याङ्बो, रमेश पौडेल ‘भावुक’, कृष्ण अधिकारी, एकु घिमिरेका भयवाद सम्बन्धी लेखहरू पनि संकलित छन् । प्रकाश थाम्सुहाङले सम्पादन गरेको ‘भयवाद वैचारिक चिन्तन’ पछि दीपक सुबेदीको यो ‘भयवाद चिन्तन र विमर्श’ दोस्रो पुस्तक हो । यो पुस्तक समालोचक, लेखक, पत्रकार, सबैको दृष्टिकोण बुझ्न सकिने ‘अल इन वन’ हो । भयवाद सम्बन्धी विद्वान् वर्गहरूको कस्तो धारणा, उत्सुकता, जिज्ञासा, अपेक्षा भइरहेको छ, त्यसको सानो अनुहार हो यो । भयवाद दर्शन र साहित्यमा प्रयोग बुझ्न यसले निकै सघाउ पुर्याउँछ । १८२ पृष्ठको यो पुस्तकको मूल्य रुपियाँ २०० छ । भयवाद दर्शन सम्बन्धी विभिन्न विद्वान्, समालोचक, चिकित्सकको अहिले सम्मको उत्कृष्ट सामूहिक कृति हो ।
पृष्ठ १५८ प्रदिप मेन्याङ्बोको कान्तिपुरको अन्तरवार्तामा ब्लास्ट टाइम्स हुन गएको छ । त्यस्तै वितरक ओरिन्टल प्रकाशनले प्रकाशकीयमा ओरिन्टल प्रकाशनको विज्ञापन अलि असहजजस्तो देखिनु यसको कमजोरी पक्ष हो । समग्रमा १४ जना लेखक, १० वटा पत्रपत्रिका र ५ जना पत्रकार समावेश भएको भयवाद चिन्तन र विमर्श गतिलो पठ्य पुस्तक हो ।